China Energy na-azọpụta n'èzí IP65 anyanwụ n'okporo ámá ọkụ ọkụ okporo ụzọ 200W400w ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ya | Kasem
Ichekwa ike n'èzí IP65 ìhè anyanwụ n'okporo ámá na-eduzi ọkụ okporo ụzọ 200W400w ọkụ n'okporo ámá
Okpomọkụ agba(CCT): 6000K (Mkpu n'ehihie)
Ogologo ndụ (awa): 8000
oriọna na-egbuke egbuke Flux(lm): 100
Nọmba nlereanya: KAIG-04
Aha ngwaahịa: Ike anyanwụ LED Street Light
ụdị batrị: 6000MAH 3.2V20AH
Igwe anwụ: Polycrystalline Solar Panel
Ihe mgbochi mmiri: IP-65
Ike 60w 90w
Ike Panel PV 6V20w 6V25W
Nha panel 419*330 509*330
Batrị 3.2V/15AH 3.2V/20AH
Isi Iyi Ìhè 3030 3030
LED QTY 180pcs 270pcs
agba okpomọkụ 6000-7000K 6000-7000K
Ụbọchị mmiri ozuzo 3-5 ụbọchị 3-5 ụbọchị
oge ịkwụ ụgwọ 5-7h site na Sun 5-8h site na Sun
Oge ọkụ 10-12h 10-12h
Mpaghara na-egbuke egbuke 100 120
Ogo ahụ 470*335*75 560*335*75
Akwụkwọ ikike afọ 2 afọ 2
Flux na-egbuke egbuke 100-110lm/w 100-110lm/w
Isi Iyi Ìhè Bridgelux Bridgelux
0 ỤLỌ ELECTRICITY & ZỌỌ ENEGY:Ìhè okporo ụzọ anyanwụ nke 100w na-ejikọta akụkụ anyanwụ, isi iyi LED, na batrị lithium n'ime kọmpat. Nabata nnukwu arụmọrụ monocrystalline silicon fotovoltaic panels, 20000mAh nnukwu ikike LiFePO4 lithium batrị (oge ndụ ruo awa 50,000), enwere ike ịgba ụgwọ n'ụzọ zuru ezu na naanị awa 4-6, na-enye ogologo oge ọrụ gburugburu awa 18-20.
Ụdị ọrụ 3:Akpaaka: Ọkụ ebe a na-adọba ụgbọala nke anyanwụ na-agbanye na akpaghị aka n'isi ụtụtụ wee gbanyụọ n'isi ụtụtụ. Radar : na-atụgharị gaa na 100% nchapụta 2 sekọnd mgbe achọpụtara ngagharị, ọ na-alaghachi azụ na ọnọdụ nchekwa ike 30% ma ọ bụrụ na achọpụtaghị mmegharị ọ bụla.
OKWU ELU NA MMỤRỤ MMỤỌ:Igwe ọkụ okporo ụzọ anwụ na-acha ọkụ nwere mgbawa LED dị elu, mmetụta ọkụ na-egbuke egbuke ma dịkwa nro, ọ bụghị ihe na-adọrọ adọrọ. Zuru okè maka azụ azụ na-enweghị ike, ebe a na-adọba ụgbọala, ebe egwuregwu.
Ọ dị mfe ịwụnye:Nke a mere ka ọkụ okporo ụzọ adịghị mkpa njikọ eletrik. Enwere ike itinye ya na mgbidi ma ọ bụ okporo osisi dị mfe (Atụ aro ka ọ dị elu: 13-19.7ft)
IP65 echebe & IKE:Ọkụ n'okporo ámá a sitere na ihe aluminom na-adịgide adịgide mere ma nwee ike iguzogide ọnọdụ ihu igwe ọjọọ niile dị n'èzí. Nhọrọ zuru oke maka ọkụ ebe a na-adọba ụgbọala, idei mmiri, ọkụ yad, ọkụ Barn.
90W Solar LED Light Street Light (270 LEDs), nchekwa ike na inogide.
Igwe ọkụ n'okporo ámá nke ìhè anyanwụ IP65 nchebe ọkụ na-ekpuchi mmiri, nke nwere ike ime mgbanwe maka ọnọdụ ihu igwe niile dị n'èzí.
Mgbe agbanyere mgba ọkụ tupu echichi, ọkụ n'okporo ámá LED nke anyanwụ ga-abanye na ọnọdụ ọrụ, a ga-agbanye ọkụ na mgbede, na chi ọbụbọ ga-agbanyụ. A na-edozi nchapụta na-akpaghị aka dịka ihe mmetụta ngagharị siri dị.
mgbawa nchekwa ike LED dị elu, ma nwee nnukwu oghere anwụ, ọkụ na-adịgide adịgide maka awa 18-20. Batrị lithium iron phosphate nwere nnukwu ikike nwere ogologo ndụ nke awa 50,000+.
90W Solar Powered Street Light na ọkụ / ngagharị akpaaka njikwa ihe mmetụta, emebere ya maka ọkụ n'èzí IP65 enweghị mmiri na teknụzụ na-arụ ọrụ nke ọma nke anyanwụ.
Enweghị ụgwọ ọkụ eletrik. Ihe niile dị n'otu ma na-ebu ya site na anyanwụ, yabụ ngwa ọkụ na-enweghị ikuku kpamkpam yana ọ dị mfe ịwụnye.
• Ejikwaghị ngwá ọrụ nwụnye na okporo osisi
• Chajịa 6-8hours na ìhè anyanwụ kpọmkwem tupu eji ya
• Gbanwuo mgba ọkụ tupu ịchaji na iji.
• Biko họrọ ọnọdụ na-enweghị ebe nchekwa maka anwụ zuru oke na mkpughe zuru oke
• Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ: -4℉-140℉ (Ọ bụrụ na okpomọkụ dị ala karịa -4℉, batrị ga-agbanye nchedo onwe ya na batrị enweghị ike ịgba ụgwọ.)
Igodo ngbanwu/ gbanyụọ egosi LED
Mgbe ị wụnyechara oriọna anyanwụ, biko gbanye mgba ọkụ. Mgbe agbanyere ìhè anyanwụ, ọkụ na-acha uhie uhie LED na-agbanye.
Ọnụego mgbanwe dị elu
Igwefoto fotovoltaic monocrystalline silicon dị elu 25W, 30000mAh nnukwu ikike LiFePO4 lithium batrị (oge ndụ ruo awa 50,000), enwere ike ịgba ụgwọ zuru oke na naanị awa 4-6, na-enye ogologo oge ọrụ gburugburu awa 18-20.
Nke gara aga: Sensọ Motion 40 50W 60 Watt Module Inductive Integrated Solar Lamp Led Street Light
Osote: 20Hours Lightiung 300W Iju mmiri agbakwunyere Led Solar Street Light Outdoo
Modern smd New Solar Led Street Light Outdoor L...
Igwe ọkụ dị n'èzí nke oge a 30W LED Wall Sconce A...